Complete ndepụta nke smartwatches na melite gam akporo Oreo | Gam akporosis
Google kwadoro smartwatches nke ga - emelite gam akporo Oreo
Edere Ferreno | | smartwatch, Gam akporo nsụgharị
Otu izu a Emere gam akporo Oreo ka ọ bia gam akporo Wear 2 smartwatches. Mmelite nke ahụ ahapụ ọtụtụ ndozi. Ma, amabeghị elekere ma ọ bụ mgbe mmelite a ga-abịa. Luckily, anyị nwere ụfọdụ ozi ọzọ mgbe ụbọchị ole na ole.
Mgbe ụbọchị ole na ole echere, Google mechara kpughee ndepụta zuru ezu nke smartwatches nke ga-enweta mmelite na gam akporo Oreo. Yabụ na anyị amatala ndị nwere ihu ọma. Chọrọ ịma ma elekere ele gị dị na ndepụta ahụ? Anyị ga-agwa gị n'okpuru!
Ụlọ ọrụ ahụ ebiela ndepụta ahụ na elele ndị emelitere ma ọ bụ nwee ike imelite gam akporo Oreo. Na mgbakwunye na ngwaọrụ ndị ga-enwe ike ime ya n'oge na-adịghị anya. Ọ bụ ezie na, ruo ugbu a ụbọchị nke ngwaọrụ ahụ 2 Weebụ Weebụ ha ga-enwe ike imelite. Na nnukwu akụkụ n'ihi na ọ dabere na ndị na-emepụta ya. Yabụ n'echiche a, anyị ga-echere.
Mgbe ah anyị na-ahapụrụ gị ndepụta zuru ezu, kewaa n'etiti ndị nwere gam akporo Oreo melite dịnụ na ndị na-anatabeghị ya.
1 Smartwatches nke nwere ike imelite ugbu a na gam akporo Oreo
2 Smartwatches nke enwere ike imelite
Smartwatches nke nwere ike imelite ugbu a na gam akporo Oreo
Smartwatches nke enwere ike imelite
Odighi Elu Ala
Ugbu a anyị na-ama mara ese na gam akporo Wear 2 na-aga imelite ka gam akporo Oreo. Ihe anyị na-amatabeghị bụ ụbọchị nke a ga-eme. Yabụ na anyị nwere olile anya ịnụ banyere ya nso nso. Bụ smartwatch gị na ndepụta nke ndị ahụ iji melite?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Google kwadoro smartwatches nke ga - emelite gam akporo Oreo
Usoro kachasị mma maka Xiaomi Mi A1
Ihe kachasị mma maka Passbook maka gam akporo